Vashandisi vakati wandei vanotaura kukanganisa kwe firmware pavanoisa macOS High Sierra | Ndinobva mac
Zvinotaridza kuti vashandisi vakati wandei vangave vachitaura matambudziko mukumisikidza iyo nyowani macOS High Sierra uye ndeyekuti kukanganisa kunoitika kana uchivandudza iyo firmware. Hatinzwisise chaizvo zvikonzero zvekukanganisa uku nekuti hachisi chinhu chinoitika kune vese vashandisi, asi ekutanga zviratidzo anonongedza kusaenderana neiyo nyowani APFS fomati uye aya maSSD.
Iyo yekuvandudza inotanga kazhinji pamakomputa aya uyezve inoratidza kukanganisa sekuratidzwa mumufananidzo watinogona kuona mumusoro wenyaya ino - yemushandisi Osiris- uye maitiro ese anomira. Iko kukanganisa kuri pachena: inokundikana apo "ichitarisa firmware".
Zvinotaridza kuti pane akati wandei maMac ane madisc ane kusawirirana dambudziko uye izvi zvinowedzerwa runyorwa izvo mugadziri OWC akataura matambudziko akafanana, izvi ndizvo:
MacBook Mhepo (11-inch, Mid 2013)
MacBook Mhepo (13-inch, Mid 2013)
MacBook Mhepo (11-inch, Kutanga 2014)
MacBook Mhepo (13-inch, Kutanga 2014)
Mac Pro (kunonoka 2013)
Vashandisi vakati wandei vanozviti havana ma disc aya akaiswa paMac uye kuti vave nekanganiso imwechete panguva yekuvandudza. Chero zvazvingava chinhu chega chatinogona kuita shandisa iyo yekudzoreredza, backup kana kurodha pasi macOS kuburikidza neWiFi, asi zvishoma zvimwe. Izvo zvinoonekwa ndezvekuti kana ikakundikana kugadzirisa iyo firmware, isu hatigone kukwidziridza vhezheni uye mhinduro chete yezvazvino kumirira chigamba kana kugadzirisa kubva kuApple. Isu hatisi kuzopera kunze kweMac mune yapfuura vhezheni ye macOS, mune ino macOS Sierra.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Vazhinji vashandisi vanotaura kukanganisa firmware paunenge uchiisa macOS High Sierra
Ndine 27 ″ i7 iMac kunonoka 2009 ine 500Gb WD Bhuruu SSD uye zvinondipa iko kukanganisa kana ndichivandudza kuHigh Sierra, ndakaedza kakati wandei uye hapana
Mhoroi, ini ndiri MacBook Pro mushandisi, ini ndanga ndichiisa iyo MacOS High Sierra uye zvese zvakajairwa, ndinoirega ichiita zvese, ini ndakangoenda kunorara uye pandinomuka ndinowana mhosho meseji uye inotangazve, ndinozviita izvozvi , Mac yangu haipfuure kutanga kwechikamu, inotakura mavara madema madiki kuti aoneke uye anozvidzorera ega uye ipapo meseji inoonekwa kuti yaive nekanganiso pakutanga, mira mashoma masekondi uye udzoke, ini ndinozviita zvese process uye chinhu chimwe chete chandinofanira kuita kana zvandingaite zvinoramba zvichiitika
Chenjera kuti hazvisi izvo izvo, netsaona, wacom mifananidzo piritsi, ini handizive kana ndataura nezvazvo pano asi kana vachigadzirisa kune yakakwira sierra iyo wacom ine vatyairi vasina kugadzirisa uye kusvika pakupera kwaGumiguru hapana.
Luis Vazquez C. akadaro
Zvakandipa imwe mhosho ..
"Com.apple.DiskManagemwnt kukanganisa 0",
Ndatora kuhunyanzvi sevhisi uye zvinoitika zvakafanana, ndichaedza kuiisa kubva 0.,
Mhinduro kuna Luis Vázquez C.
Juan Ma Noriega Cobo akadaro
Neraki ndakapasa zvakakwana yenyaya iyi. Zvirinani kumirira
Pindura Juan Ma Noriega Cobo
Albert Malaga akadaro
Paunenge uchivandudza iyo, iyo yekupedzisira skrini haina chinhu uye haina kutangazve, inofungidzirwa kuti yakaiswa mushe. Iwe unofanirwa kubaya bhatani bhatani uye kubatidza zvekare ...
Pindura kuna Albert Malaga
Isaac Fuste Sanz akadaro
Iko kukanganisa kunoitika kwandiri muMBP yangu kubva pakati pa2010, ine Samsung SSD.
Ini ndakaisa iyo SSD panzvimbo yeCD drive.
Pindura kuna Isaac Fusté Sanz
Chokwadi Apple ichagadzirisa, sekugara ...
Zvakanaka kune vose.
Iko kukanganisa kwakafanana neiya yakataurwa naOsiris.
Ndine 27 ″ iMac kubva kunonoka 2009.
ndine zvishandiso zvakafanana uye dambudziko rakafanana neakakosha ssd 240gb.
Zvinotaridza kwandiri kuti ndichadzokera kuSierra uye kubva kuSierra ini ndichagadzirisa iri zano rangu repamoyo
Jose Hurtado akadaro
Ndine iMac 27 i7 kunonoka 2009 kwandakatsiva iyo dvd ine yakakosha 240 gb. Kekutanga nguva pandakaedza kuimutsiridza yakandipa iyo firmware kukanganisa. Asi ndakaiyedza kechipiri uye zvakandishandira uye ikozvino zvava nemaapfs. Pakati pekuyedza kuviri hapana chandakaita.
Pindura José Hurtado
Mumwe munhu akawana mhinduro kwandiri chaizvo zvakafanana chinhu chakaitika kwandiri, ini handidi kurasikirwa nemafaira angu
Macbook Pro Mid 2010 ine Sandisk Plus SSD inondipa kukanganisa uye haigadzirise, inotumira ini kuti nditangezve.
Pindura kuna Emanuel
Macbook Pro toshiba hard drive, ini ndinowana kukanganisa system mapakeji Os nezvimwe ... zvinogadziriswa sei? Kana kuti tichava nemhinduro riini?
Zvakafanana firmware kukanganisa:
iMac (27-inch, Gare gare 2009)
750 Gb SSD Yakakosha CT750MX300SSD1
Ndiine iMac 27 »I3 2010 Ini ndakachinja iyo DVD yeSAMSUNG 840 PRO SSD
uye yakaiswa pasina matambudziko.
Ndi Mac Pro (gore ra2013 rapera) zvese zviri pamutemo zvinhu.
Iko hakuna nzira, kana kubva kuchitoro chemaapuro, kana ne bootable USB.
Kwete kana kutanga kubva kune yekutanga OSX, mune yangu Mavericks
Nguva dzose iyo firmware yekuongorora kutadza kukanganisa.
Ndataura neApple technical support, uye ivo vanoti havana rekodhi
yemhosho iyi, uye kuti pamwe iri dambudziko rehardware.
NaSierrra uye nezvose zvakapfuura, zvagara zvakanaka.
uye ikozvino dambudziko rehardware?
Mushure mekuvandudza kuenda kuMasOS High Sierra 10.13, handichakwanise kuendesa mafaera akakura kupfuura 2 GB kune External Hard Drive muMS-DOS (FAT32) fomati, pandinoyedza kuzviita ndinowana yambiro inoti: Chinhu "xxx" haigone kuteedzerwa nekuti yakakura kwazvo kune vhoriyamu fomati (iri 2,67GB)
Ini ndakanga ndisina dambudziko iri kana ndichishandisa chero yapfuura vhezheni yeanoshanda system.
Kunze kweizvozvo ini ndichiri kushandisa imwechete yekunze hard drive senguva dzose.
Chii chandingaite kuti dhijitari rangu rekunze riite basa zvakare, pasina kuigadzirisa?
Carmelo, izvo zvaunogona kuita kukanda Mac yako mumarara uye kutenga zvinhu zvinoita.
Fat32 haitsigire mafaira akakura kupfuura 2gb, iratidze kune exFat kuitira kuti igone kushandiswa nehurongwa hwakasiyana
Icho hachisi chokwadi, iwo ari 4GB, muchokwadi ini ndine mafaera akakura kupfuura 2GB pane imwechete diski.
Chero mhinduro kune izvi?
Zvinogumbura chaizvo nezve zvakaitwa nemaapuro kubva pakaenda Jobs, hazvishamise kuti vanobva pakuipa vachienda pakuipisisa, ini ndakagadzirisa kusvika kukwirira kweSerra uye kwave kuri kutambudzwa, sezvo hurongwa hwese hunotonhora, haindibvumidze kuvhura dhairekodhi, zvirongwa havapindure, zvakanaka ... yakaipa shit .... Uye izvozvi zvandisingakwanise kana iwe uchida kudzoreredza mafaera angu ... madhimoni vanakomana vezvibhakera
Pindura kumakumbo embudzi
Ndine urombo tsoka dzembudzi, ndakapindura kuna Ferransky pachinzvimbo chako, asi hei, izvo zvinoitika kwatiri tichitenga mbanje neMac brand, zvikwata zvangu zvinotevera hazvizove neapuro yakaora sechiratidzo. Chisara Mac.
Ferransky Uri kutaura nezvei? Sekureva kwetsoko dzaMac, tiri vamwe vevashoma vane matambudziko nemapurogiramu avo, kwavari zvese zvinoshanda sedumwa, vanokutengesera marara nemitengo yakakwidziridzwa, unozvitenga, vanoita mari yakawanda, kana iwe une matambudziko Nekusagadzikana kwavanokutengesera, ndiwo matambudziko ako, ivo havana hanya kana kuita hanya nazvo.
kubvumirana zvachose. Ini ndinofanira kuva nezvose kubva mac: iphone, ipad, imac ... ndanga ndichichinja zvese kwemakore mashoma nekuti ndanyadziswa uye ndatsamwa. Mushure mekutanga kana yechipiri software yekuvandudza iwe unofanirwa kukanda chishandiso kure nekuti zviri pachena kuti vavaki vayo veyedzo havaite basa ravo nemazvo kuona kugarisana. Iwe unofunga kuti kambani yakakosha uye yakavharwa haifanirwe kunge iine matambudziko aya, asi iwe unoshamisika. Parizvino ini ndinongochengeta iyo iMac, pakati pa2011, iyo mushure mekudzoserwa kuSierra yakange ichinonoka uye kuti ini ndichakurumidza kutsiva ne windows pc.
Carlos Arias chinobata mufananidzo akadaro
Sezvo ini ndakaisa Mac OS Hight Sierra, kutanga iyo "Mail" application haina kunditendera kudzima mafaera uyezve mune yechipiri kumisikidzwa, pandakaivhura, yakandikumbira kuti nditore mameseji angu kubva kuYahoo! Uye pandakadaro, ndakagamuchira meseji "kukanganisa kwaitika", kwandakanga ndisingachagone kushandisa Mepi zvachose. Tatarisana nekutadza uku uye nezvimwe zvakamuka, semuenzaniso muBitdefender, iyo isina kumbobvira yakundikana ini kwemakore akati wandei ekushandisa, ini akamanikidzwa kudzokera kuMac OS Sierra uye pano zvese zvinoshanda zvakakwana. Ini ndinofunga kuti zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa muMac OS Hight Sierra uye ini handikurudzire kuzviisa izvozvi, kudzamara Apple yagadzirisa matambudziko aya, kunze kwekukanganisa kwekuchengeteka uko vamwe vashandisi vataura uye kuoma mitezo kwekumisikidza nekuda kwematambudziko mu iyo Firmware.
Pindura kuna Carlos Arias
Carlos, iyo nyowani system ndeyekupenga, wakakwanisa sei kudzokera kune yapfuura vhezheni? Zvinoenderana netsoko dzaMac dzisingagone kuitwa.
Edza kutangazve uye pinda Command + R. Unodzima iyo yauinayo wobva wadzoreredza: kana ndisina kukanganisa, ichaisa yakajairwa Sierra kwauri ... ndiudze kana ichikushandira.
Thanks Fco. Ini ndatozviita sezvizvi, asi nguva dzese ndinozvimanikidza kuisa iyo nyowani macOS Sierra 10.13 uye haina kunditendera kuti ndidzokere mushanduro yapfuura, ikozvino ndiri kutambura zvakanyanya nekuti iyi nyowani yekushandisa system iri zvakaipa, ndinofunga Apple Iri kutorova pasi, asi vanogona kundishamisa nezvisina maturo zvisina maturo, saka zvirinani ndironge kudzokera kuWindows, zvirinani ipapo vanonditendera kuti ndigadzire komputa ine simba mukuda kwangu uye havandimanikidze kushandisa AMD makadhi emifananidzo.
Zvakanaka saka handizive kuti ndikubatsire sei ...
Zvinoenderana neApple, kana ukadzvanya Sarudzo, cmd + R; Iwe unogadziridza yazvino vhezheni (Yakakwira Sierra), asi kana iwe ukangodzvanya iyo cmd + R makiyi; Iwe unofanirwa kugadzirisa kune iyo vhezheni ye macOS iyo yako Mac yakasiya fekitori (yakajairwa Sierra).
Kana iwe uri kuverenga izvi, usadzokorore kune macOs High Sierra, ndinodzokorora: USAZVIWEDZESE, iro redambudziko iro risingakwanise kuiswa idambudziko diki richienzaniswa nekukanganisa kwese kwavachave nako, rimwe zuva rakanaka ivo vachango vasingakwanise kuisa yako hard drive senguva dzose uye ivo vanofanirwa kumisikidza uye kumisikidza kubva pakutanga, rimwe zuva kana password kana mutariri havazozviziva uyezve ivo vanofanirwa kumisikidza nekuisa kubva pakutanga, uye hapana kumira ipapo, kana vakangoshandisa Mac kunyora zvisina maturo ini ndinofunga masocial network anogona kuishandisa pasina matambudziko, asi kana vaine zvikumbiro zvinoverengeka zvinobatsira pamabasa avo ezuva nezuva, kana vane mitambo, akati wandei aya anomira kushanda sezvo zvisingawirirane neiyi nyowani system, maIshe eMac ari kubva pakuipa achienda pakuipisisa, zvekuti ini ndatoona Windows 10 seye runako runoshanda, ehe, ehe, ndinoziva, madzishe e chafrosot anogadzira marara, asi madzishe eMac ari kuvakunda pakuita mapurogiramu akaipisisa, izvo chete izvo zvinochengetwa neMac ndezvayo mitengo yakakwira, iyo isingakodzere kubhadhara parizvino, kunze kwekunge uine imwe pfungwa yekudzora pfungwa kana chimwe chinhu; Mac akamira kuve zvaaive, unofanira kuzvibvuma.
Ndine Imac nyowani kubva kumavhiki mashoma apfuura uye yakandipa kukanganisa kana ndichiedza kuisa macOS High Sierra ... ndakawana chiratidzo chakarambidzwa chine mutsvuku uye chaisazondirega ndichifambira mberi ...
Mushure mekubvunzana neApple technical service ivo havana kukwanisa kugadzirisa dambudziko uye ini ndanga ndakamirira kuti vandisheedze nemhinduro ...
Mushure mekuverenga kwakawanda kutenderedza mambure, ndakaedza izvi: https://support.apple.com/es-es/HT204063 uye yagadzirisa dambudziko kwandiri!
Ini ndanga ndatokwanisa kuiisa pasina matambudziko uye zvese zvakanakira izvozvi!
Ndinovimba inogona kukubatsira!
Ini zvakare ndakakwanisa kumisazve iyo MAC neiyo rutsigiro url iyo Fco yaive nayo.
Zvirinani ndakakwanisa kudzoreredza MAC SIERRA.
Uye shandisa Time Machine
Pindura kuna amora
Dambudziko rawaive naro, idambudziko diki, iwe hauzive chakamirira iwe, unenge watozvitsvaga, ivo vakawana hombe hombe mune macOs Sierra 10.13 inoisa pangozi mapassword ako ese akachengetedzwa, asi chokwadi ndechekuti kutamba kwemwana kunoenzaniswa kune vese mabhuru akaitwa nevakuru veApple mune ino nyowani yekushandisa system.
Kana paine munhu arikuverenga izvi nenguva: USATSIGIRA.
Iwe unogona kutaura kuti iwe unongoshandisa yako mac kunyora zvisina maturo pamasocial network, ini ndinogona kutaura kubva pane yako chirevo, saka, saka smart. Wakamboshandisa maeuron ese aunofanirwa kuita ekutaura pamusoro soro? Kutenda kuvanhu vakaita sewe, Apple inoita mari yakawanda kutengesa zvigadzirwa zvemhando yepasi. Mhanyai, endai mumutsetse kumusoro kuchitoro cheApple kuti uve wekutanga kutenga yavo isina kunaka iPhones.
Mhoro kwaziso nekuremekedza kwangu kune vese ini ndinokuudza kuti ini ndichangobva kuvandudza machena macbook 2010 kuti osx high sierra isina dambudziko rakakura, yakangoti nonokei asi yatove yakajairika, ingori diki diki g mifananidzo yandinofunga nekuda kwendangariro d 2 gb qn inokwana pamwe iine yakawanda gb d ndangariro inogadziriswa, CHAO¡¡¡¡¡¡. uye rombo rakanaka ku ls ravasina kuisa uye kuti vanozviwana KUKWANISA DSD VENEZUELA
Wakatove uine macOS High sierra yakaiswa uye kudzoreredza. Ndichishandisa ese akakosha masanganiswa anopiwa neApple, ini handina kukwanisa kuiisa nekuda kwekukanganisa uku. Izvo zvinongondiita kuti ndidzorere High sierra.
Ndokumbirawo, kana paine munhu ane mhinduro, ndiudze. Zvikasadaro ndiri kuzochengeta yakanaka $ 1000 mapepa ekurema (MacBook Air kunonoka 2014)
Hama, ndakagadzirisa iyi vhezheni itsva uye handina kupa zvishoma zvishoma kunyanya mune inoenderana desktop.Ndakaona kuti kana uchichinja mu skrini yakazara mimwe mitsara yakatwasuka inoonekwa sekunge iwo magiraidhi haana kuvandudzwa zvakanaka.
mumwe munhu akaitika zvakafanana?
Zvakaitika kwandiri .. Ndakawana yambotaurwa meseji yambiro nezve dambudziko uye pandakaedza zvakare ne restart sarudzo, yakariisa pasina matambudziko. Kuti kana ... zvakatora inopfuura awa nehafu, iyo nguva yasara meseji haina kumbotama, akati wandei otomatiki reboots uye zvimwe zvinhu zvisina kujairika panguva yekumisikidza, asi yakaisa uye yakagadziridzwa zvakakwana.
Zvese izvi zvakaitika pane Mini-makore maviri Mac Mac.
Ndine dambudziko rakafanana.
Kuendesa kuyedza kununura mafaera uye mafoto.
Jose tovar akadaro
Zvakafanana ne macbok pro ine yakakosha ssd. Kutanga nemirairo + R inondibvumira kuisa OS sierra kana kopi yemuchina wenguva, wandisina kuvandudza kweinopfuura gore, saka ndinofanira kurasikirwa neROTI remafaira… ..
Pindura kuna Jose Tovar
Sebastian Riquelme akadaro
Thunderbolt hard drive haina kundiziva.
Pindura Sebastian Riquelme
Ini ndinongowana meseji yekuti mac OS haigone kuiswa pakombuta, ndinoitangazve uye chinhu chimwe chete, ndoitei ???
Nhasi mushure mevhiki rekutambira matsva ekuzivisa «ndatora nguva» kugadzirisa MacBook Pro…. Yakatangazve uye maminetsi mashoma gare gare chena chena ine chiratidzo "chakarambidzwa" yakaonekwa …… ndakaidzima uye nekubatidza ndakabatidzira cmd + R… .. kupora…. izvozvi iri kuisa kubva ku macOS High Sierra…. Handizive kana ichataridzika zvakanaka nekuti zvinotora nguva ingangoita yeawa nehafu.
Wow! Kushungurudzika kwakadii ... .ndanga ndisingazive nezvenyaya iyi uye ndichitsvaga mhinduro ndakawana yako blog… ..uye TOO LATE yambiro KWETE kugadzirisa ...
NDATENDA iwe neruzivo rwakakosha.
Mazuva mashoma apfuura ini ndakaisa chigamba chekuchengetedza paMini, kunonoka 2012, neHigh Sierra. Hazvina kuzomboshanda zvakare. Iye anogara pakutanga kwe block, ine yakazara bar.
Ndakaedza nzira dzakasiyana dzekupora (mushandisi mumwe chete, alt + cmd + R + P, gadza kubva kumaturu emidziyo, asi hapana). Ini ndakamirira kurairwa, ndichitarisira kudzivirira fomati uye zvichizotevera kurasikirwa kwedata.)
Mhoroi, tine 2013 macbook pro ine macosx sierra kwemwedzi mumwe uye nezuro manheru nechimwe chikonzero yakagadziriswa otomatiki iyo yakakonzera kuti kana sisitimu yadzorerwazve yaizorembera zvachose pakupera kwekumisikidzwa nechiratidzo chakarambidzwa pachiratidziri neMuchena kumashure.
Mushure mekuyedza zvinhu zvakasiyana uye ndisingambodi kukanda kunze kweyemuchina backup yakaitwa muna Gumiguru sezvo zvandaifarira kwaive kupora mafaera akagadzirwa kusvika munaZvita, ndakaedza safari kuburikidza nemenyu yekudzoreredza uye kunyangwe zvaive kunze kwevimbiso yekubata technical technical .. hwindo rekutaura ravasina kumbobvira vapindura, pakubuda kwavo zvakaitika kwandiri kuti ndipinde dhisiki rekutanga uye kana kudzoreredza sisitimu yakatanga futi uye ini ndakapora zvese zvakajairwa.
Ini ndichasimudza ndoita zero kumisikidza ine data mugore sezvo ndisina kuvimba nebvudzi ... ini ndinotaura pane izvi zvese, kuti ndione kana kuita rubatsiro kuchiita kumwe kuraira kumashure uko kunotendera kutanga kudzivirira zvikanganiso uye kupedzisa kuisirwa nenzira iyi .. rombo uye tariro unodzoreredza mafaira ako.
Ini ndaifanira kubatana nedata renhare yangu uye kurodha pasi OS X El Capitan Iyo yapfuura software nekuti iyo yekuvandudza inokanda kukanganisa neiyo firmware saka yakandisiya ndisina michina. Ndiri mubishi rekudzokera kumashure. Hembe yakadii!
Thailand inogadzirira kuvhura yayo yekutanga Apple Store
Gadzira ekutanga makadhi ebhizinesi zviri nyore neGN Bhizinesi Kadhi